Santorini टापुमा उत्तम होस्टलहरू
सपना लक्जरी सूट (IMerOVIGLI)
मिल घर गोदाम सुइट्स (फ्रिटोस्टफेनी)
ANTASSIS अपार्टमेन्टहरू (Imerovevigli)
Santorini मा Lantorini मा pantorini मा, मूल्य, समीक्षा, समीक्षा र उत्कृष्ट फोटोहरू
तपाईं Santorini मा बस्नु पर्छ?
V3> vlychada, GISH, ग्रीस
सान्ततामीलाई ग्रीसको सबैभन्दा पर्यटक टापु मानिन्छ, र मौसमले वर्षभरि यहाँ रोकिदैन। र हिउँद र गर्मी मा, हजारौं पर्यटकहरु pifte 43 दिशाहरु मध्ये एक को प्रशंसा गर्न सान्ततावादी आउँछन्, जसलाई मृत्यु मा हेर्नु पर्छ, आधिकारिक स्मिथसन माग अनुसार मृत्यु को लागी। ओम। थप रूपमा, टापु विवाह र हनीमूनको लागि एक लोकप्रिय गन्तव्य हो।
लेखक क्वा kekoblog को विचार: Santorini को एक यात्रा अधिक अविस्मरणीय बनाउन सकिन्छ, प्रेम कहानी को शैली मा एक रोमान्टिक फोटो सत्र अर्डर गर्न सकिन्छ, प्रेम कहानी को शैली मा एक रोमान्टिक फोटो सत्र बनाउन। हाम्रो लेखमा यस र अन्य विचारहरूको बारेमा।
सान्तार्डिनीको प्रयोग गरिएको छ लोकप्रिय लोकप्रियता कत्तिको लोकप्रिय छ कि यो भइसकेको छ कि 1 13,000 भन्दा बढी जनसंख्याको साथ, एक प्रसिद्ध होटल पोर्टल।
यो तथ्यलाई ध्यानमा राख्दै छ कि त्यहाँ बुकिंग प्रणाली छ, Santorini मा इष्टतम प्रस्ताव मूल्य गुणस्तर पूर्ण रूपमा सरल छ। तर के गर्ने यदि तपाईं एक विशेष उद्देश्यको साथ टापुमा जान तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? उदाहरण को लागी, Santrini मा त्यहाँ हनीमोन खर्च गर्न को प्रिय महिला को हृदय कब्जा गर्न को लागी।
यस प्रश्नले यस प्रश्नको उत्तर दिदैन, र तपाईंले आफ्नो आधासँग गोपनीयताका लागि उत्तम उपयुक्त छ भनेर ठ्याक्कै उपयुक्त छ। तर कार्य सरलीकृत गर्न सकिन्छ, द्रुतभासर साइटको प्रयोगकर्ताहरूको समीक्षा अनुसार रोकिन्छ।
रेटिंगको विजेता एक होटल जटिल छ क्याल्देरेको उच्चतम बिन्दुमा अवस्थित छ। यसमा केवल books कोठा छ, तर ती प्रत्येक एक लमलारी हो।
होटेलका सबै कोठाहरू यस शताब्दीभन्दा बढी पहिले भएको परिसरमा अवस्थित छन्, र आधुनिक सुविधाहरूको साथ परम्परागत क्लाउडिक अवस्थालाई जोडे।
होटलको प्रत्येक सुइट्रेटले एक पौडी खेल्ने पोखरी वा तातो टबको साथ आफ्नै टेरेसेको छ, जसले अजेदान समुद्र, सतारिनिनीको प्रख्यात सूर्यास्त प्रदान गर्दछ।
firostefani गाउँमा अवस्थित छ, होटेल एकै समयमा छ, सान्त हन्टिरिनीको राजधानीबाट 0000 मिटर - फिराको शहर हो।
यो सानो होटेल जटिलले पाहुना 1 13 कोठा प्रदान गर्दछ, र होटेलको भान्डेले ज्वालामुखीको एक चम्चा आउँदछन्।
होटलको चिप यो हो कि यो चट्टानमा काटिएको छ र प्रख्यात सूर्यास्त सनटारिनी पछाडि सवारी हुँदैन। तिनीहरू टेरेसबाट सिधै प्रशंसा गर्न सकिन्छ।
सान्ततारी होटलहरू क्याल्देरेको दृश्यहरू, उनीहरूको बहु रंगीन विन्डो शटरहरू, घुमाउने महिलाहरू र शानदार निलो निलो पोखरीहरू तपाईं ग्रीसको धेरै फोटोहरूमा देख्न सक्नुहुनेछ। र तपाईं केवल देख्न सक्नुहुन्न, तर बुक गर्न पनि! आजको लेखमा हामी तपाईंलाई CaldERA ज्वालामुखीको दृष्टिकोणले उत्कृष्ट सन्तंख्याटि होटेलको बारेमा भन्नेछौं। यद्यपि यी होटलहरूको ट्रेनहरू सब भन्दा बढीको मूल्यहरू हुन्, हामीले तपाईंको लागि महँगो र ठाँउ र बजेट विकल्पहरूको रूपमा तपाईंको लागि छनौट गरेका छौं।
सान्ततािनी होटल होटलहरू यस ग्रीक टापुको वास्तविक सजावट। एक नियमको रूपमा, त्यस्ता होटलहरू चट्टानको ढलानमा निर्माण गरिन्छ, र केहि चट्टान वा गुफामा घाइते हुन्छन्। तिनीहरू दु: खी छन् कि धेरै पर्यटकहरूले उनीहरूको तस्विरहरू लिन्छन्, यो पनि होटलले तिनीहरूलाई होटेलबाट हटाइयो।
खराब होटेल वार एथेन्सको देवीको नाम कहलाइनेछैन। उही एथेना सँधै उपनाम संग झिक्न, जीत को देवी को लागी। अत्ना लक्जरी सुइटहरू क्याल्डिवेरा, सुन्दर कोठा र एक सुन्दर पोखरीलाई हेरेर हेरेका छन्। होटल कतै सुविधाजनक छ: बस स्टप र शहर केन्द्रको नजिक, काल्डेरेरा ज्वालामुखी - चट्टान चट्टानमा, जसमा होटल निर्माण गरिएको छ।
यस होटेलको केहि कोठाहरू गुफामा काटिन्छन्, समुद्रको सुन्दर दृश्यको साथ बाहिरी तातो टब छ। सबै पाहुनाहरू - एक उपहार को रूप मा दाखमद्य को एक बोतल!
- पृथ्वीमा सब भन्दा सुन्दर ठाउँहरू मध्ये एक र, मलाई विश्वास गर्नुहोस्, हामी बढाइचढाइ गर्दैनौं! ल्यान्डस्केपहरू, ज्वालामुखी, ग्रुप, गहिरो निलो र सुरम्य गाउँहरूले यस टापुलाई यति अनौंठो र विशेष बनाउँदछन्! यस टापुमा बस्ने भेट्टाउन गाह्रो हुन सक्छ, विशेष गरी गर्मीमा, जब हजारौं यात्रुहरू भ्रमण गरिन्छ! तपाईंको जीवन सजिलो बनाउनको लागि हामीले 21 सर्वश्रेष्ठ होटल फोटो, विस्तृत जानकारी र पूर्ण कार्ड जम्मा गरेका छौं!
कृपया नोट गर्नुहोस् कि किक उत्तम र सबैभन्दा महँगो होटेलहरू मध्ये एक हुन सक्छ, र तपाईले केही महिनामा (PAT6देखि) बाट ब्यूँझन आवश्यक पर्दछ!
सबै भन्दा राम्रो होटेलको पूर्ण सूचीमा जानु भन्दा पहिले, म कसरी बस्छु भन्ने बारे थोरै बताउन चाहन्छु।
<< p> मेरो रायमा उत्तम ठाउँहरू, फिरा, इमोरोभिलेली र फरिजफेनी, जतिजाई ज्वालामुखी र काल्डेराको सुन्दर दृश्य प्रदान गर्दछ।
बस्न धेरै लामो हुन सक्छ, त्यसैले तपाईले निर्णय गर्न आवश्यक छ कि तपाइँ क्याल्डेराको छेउमा रहन चाहानुहुन्छ कि हुनुहुन्न। तपाईंको जानकारीमा, तथाकथित "क्याल्डल्याण्ड" शहरहरू अधिक महँगो छन्, ठूलो आकर्षण र विलासी होटल सहित। अर्कोतर्फ, समुद्री किनार नजिकै गाउँ सस्ता छन् र अधिक आरामदायी हुन्छ! काल्डेन्डल्याण्ड शहरहरूमा, काठमाडौं शहरहरूमा मेरो विचारमा त्यहाँ टापु अद्वितीय हो। तर फेरि, यो सबै तपाईंको प्राथमिकताहरूमा निर्भर गर्दछ!
त्यसो भए, 201 2019 को लागि हाम्रो उत्तम होटेलहरूको सूची साथै 201 2019 को लागि सब भन्दा सस्तोमा शुरू हुन्छ, (अर्डर, अवश्य, अनियमित!)
मा सबै भन्दा राम्रो होटलहरू
हामी यस होटेलमा लगभग सबै चीज मन पराउँछौं! उत्कृष्ट सेवा र मैत्री र व्यावसायिक स्टाफ अद्भुत सुविधाहरूमा। तपाईंले आउटडोर गन्डस्क्रिटलाई कुटपिट गर्ने र पक्कै पनि होटलबाट हेर्नुहुनेछ! रक स्क्वारीमा सूर्यास्त!
1 186464 को कप्तानको ऐतिहासिक घर छ जुन चक्रपिक गुफा घर र 1 th औं शताब्दीको चरित्र तत्वहरूको मिश्रण हो। यो एक सुरम्य गाउँमा अवस्थित छ, अम्माैडै बीचको धेरै नजिक छ र AEGEN SAR को एक विशाल दृश्य प्रदान गर्दछ, ज्वालामुखी र विश्व प्रसिद्ध Caldera।
होटेलहरू पहिलो लाइनमा atterfont मा छन्। त्यस्ता होटलहरूको फाइदा स्पष्ट छ: समुद्री किनारमा प्रत्यक्ष पहुँच, समुद्रको सुन्दर दृश्य, पानी मनोरन्जनको विविधता। पहिलो कोस्ट्रेटका केही रिसोर्टहरू गर्मीमा सूचकहरू सुनका डोरीहरू, पोखरी र सुन्दर इलाकाको साथ सुसज्जित समुद्रहरू छन्।
हामीले सान्तविनीमा पहिलो समुद्री तटमा सर्वश्रेष्ठ होटलहरू लियौं। संग्रहमा वास्तविक पाहुना र लोकप्रिय होटेलको उच्च मूल्या assessment ्कनसँग उच्च-गुणवत्ता सुविधाहरू समावेश गर्दछ। तपाईले मन पर्ने होटल छनौट गर्न सक्नुहुन्छ र सब भन्दा लोकप्रिय बुकिंग प्रणाली मार्फत कोठा बुक गर्न सक्नुहुन्छ।
सूचीले सट्टेरी दायरामा सट्टेरी दायराको धेरै किनारमा होटलहरू देखाउँदछ। यहाँ तपाईं प्रिय लक्जरी होटेलहरू र प्रीमियम क्षेत्रहरू र प्रीमियम फ्रिमेन्टहरू र गुणस्तरीय / गुणवत्ता रेटिंगको लागि सस्तो मूल्यहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ। आवासको लागि मूल्यहरू हाम्रो डाटाबेसको लागि होटेल थप्ने समयमा सान्दर्भिक छन् र तपाईंको मिति भन्दा फरक हुन सक्छ।
* होटलको सस्तो कोठामा रहनको लागि अनुमानित मूल्य संकेत गरिएको छ। सान्ततारी होस्टलमा बस्नेको लागत विनिमय दर, मौसम र चयनित भुक्तानी र सेवा विकल्पहरूमा निर्भर हुन सक्छ।